Resaky ny mpitsimpona akotry : fiparitahan’ny fitaovam-piadiana sy fampihorohoroana | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : fiparitahan’ny fitaovam-piadiana sy fampihorohoroana
Mampihorohoro ny mponina ny tsy fifehezana ny fandriampahalemana amin’izao fotoana izao. Raha tsy mandry ny tany, mihevitra ny vahoaka fa tsy mahefa ny adidiny ny fanjakana. Maro ny mponina no miezaka mikaroka fiarovan-tena ary misy noho izany no mivarina any amin’ny fanaovana fitsarana an-dàlam-be tsy ara-dalàna. Fanararaotana ny fisehon’izany tsy filaminana eo amin’ny fiarahamonina izany, maro no mikaroka fitaovam-piadiana voarara. Saropady satria mahery vaika afaka ampiasaina ifofoana ain’olona. Ny zava-boarara toy ny ratsy rehetra moa dia tsy kely làlana. Na izany aza, arakaraky ny fahasarotan’ny làlana no maha sarobidy ny zavatra. Tsy mandigana izany lalàna mifehy ny takalo ara-toekarena izany ny tsenan’ny fitaovam-piadiana. Varotra an-tsokosoko ny fitaovana sarobidy, lasa lafo vidy noho ny havitsin’ny tolotra. Eo ankilany ny fitombon’ny mpitady.
Mila vola ary mitarika fahasahiana ny fividianana ireny basy toy ny kalaky ireny. Aiza moa ny vola ? Moa ve tsy ireo vahiny, na Vazaha izany na Karana na Sinoa no enjehin’ny mponina ho mpanana ka noho izay, mizaka ny endrikendrika ho mpangorona fitaovam-piadiana? Misy amin’izy ireny moa no tsy misalasala mampiseho fahasahiana amin’ny fanaovana herisetra, miseho tompon-daka noho ny teratany. Matetika anefa dia maro ireo fikambanana an’ny vahiny maneho firaisankina amin’ny fanaovana asa soa. Tsy manakana izany araky ny fahatsapan’ny mponina. Ny ankamaroany amin’ny vahiny, amin’ny andavan’andro, dia manalavitra ny fiainam-bahoaka ary raha sendra miharoharo aza dia mitady hanjakazaka. Tsy ny maha vahiny azy angamba fa araky ny tranga mahazatra, ny mpanana tsy miray vilany amin’ ny mahantra.
Mitombo anefa amin’izao fotoana izao ny fifindramonin’ny olona noho ny fitadiavana. Mitovy nefa tsy sahala ny fisehony. Ny mponina avy aty amin’ny tany mahantra dia mitady ravin’ ahitra maitsomaitso kokoa hahafahany mivelona tsaratsara kokoa. Ireo vahiny eto an-toerana kosa matetika tonga hitrandraka sy hanangona harena. Ny tena any aminy dia tsy manana anjara afa-tsy ny fitampifimpifiana fa izy kosa eto toa avela hibahambahana. Tsy manangona harena fotsiny hono izy ireo fa manampy be eo amin’ny famokarana harena. Noho izany no nananganana sampan-draharaha hanambitamby sy hanamora ny fandrendriky ny mpanam-bola any ivelany harena atao hamokatra eto an-toerana. Tsy tena tafa anefa izany. Mpitrandraka marani-tsaina amin’ny fanambakana sy fitsikombakombana no mazana mameno tanàna.